Chitsauko Chitanhatu | Faraitose's Blog
Sezvo mabataniro akaita mwoyo nemapapu apa mukana wekuti vanhu vataike; kukanganisa kunoita avo vanotsvaka ruzivo rwemaumbirwo akaita muviri [vatsvakuzivo vose vemaumbirwo emuviri vanoda kuti vaongorore nhengo, votsanangura zvavaona, vorakidza vamwe zvavaona, vokumbaruzivo rwese rwungawanikwa pamusoro padzo] kuti vanongo ongorora muviri wemhuka imwe chete, munhu – uye munhu akafa. Vano kanganisa pakuti voda kubva vatsanangura usikwa hwose kubva muchinhu chimwe chete chava nanga [zvakafanana nekuda kudzika ruzivo rwose rwematongerwo enyika pamusoro pekuongorora hurumende imwechete mashandiro ayo kana kuti unoziva hurimi hwose wangoona munda mumwe chete].
Dai vaine ruzivo rwekuviya nekupatsanura mhuka [mhenyu] serwavanarwo rwekuviya munhu akafa, nyaya iyi yanetsa vakawanda ingadai yakatopedzwa nyorenyore.
Tikatanga nehove, semhuka dzisina mapapu, dzine ventricle rimwe chete, zvinongooneka zvega. Nekungo tarisa chete tinoona kuti nekutarisa zve tagura atari [ropa richi buda panorova mwoyo pega pega] zvino rakidzika kuti [izvi vazhinji vanozvibvuma], kuti samba reropa rizasi kwemwoyo [rinova ndiro rimwe neauricle] rino dira ropa mumwoyo, iwo uno riendesa mberi mupaipi kana kuti atari kana kuti nhengo inoita seatari.
Totevera tichiti zvimwezvo zvinoonekwa mudzimwemhuka dzine ventricle imwechete sezvakaita zura, datya, nyoka kana dzvinyu. Mhuka idzi dzinonzi dzine mapapu nekuti dzineizwi [ndine zvandakaonawo nezvandino ziva maererano nekurongwa kwenhengo dzazvo pamwe nemapapu, asi izvi hazvinei panyaya yatinayo iye zvino], zviri pachena nekuona chaikwo kuti ropa rino fambiswa mumavheini richienda kumaatari nekurova kunoita mwoyo. Zviri pachena, mukana uripo, zvichiratidzika, hazvinetse kuzviona, hapana kusagutsikana. Mumhuka idzi zvakaita sekunge mwoyo wemunhu wakavhurika pagamuro rinogova kuti kurudyi nekuruboshwe wemwoyo. Ipapa handifunge kuti pane ainetseka nekuti ropa rinobva sei kumavheini richienda kumaatari.
Sezvo mhuka dzisina mapapu dziri dzakawanda kupfuura dzinawo, idzowo dzine ventricle rimwe dzichi pfuura dzine rimwe, hazvinakuoma kuona kuti mhuka zhinji kazhinji kacho, ropa rinobva kumavheini richienda kumaatari nenzira iripachena, nzira ino pfuura nemumwoyo chaimo.
Izvi zvinoonekwa mumwana asati azvarwa emhuka dzine mapapu. Tsingaropa ina dzemwoyo [dzinoti: vena cava, Atari-inenge-vheini, vheini-inenge-atari neatari huru] dzakabatana zvadzisina kuita munhu akura. Nyanzvi dzemaumbirwo emuviri vakazviziva kare izvi.
Mumwana asati azvarwa Vena Cava inobatana ne vheini-inenge-atari. Izvi zvinoitikira vena cava ichangobva muchiropa isati yapinda mumoyorudyi, uyewo isati dirana nevheinicoronari. Kubatana uku kuita kuti kuve nesanganiro kurutivi rine pindiro guru rakatenderera sezai murutivi mevheini-inenge-atari. Pindiro iri harina dzivo zvekuti ropa rinongo erera pasina bingidzo kubva muvena cava richipinda muatari nemuauricle reruboshwe nemoyoruboshe. Kudivi rakadziva kuvheini-inenge-atari papindiro iri ndipo pane dzivo rinenge deko, rino kwidibira, rakakura kupinda pindiro racho. Mumunhu mukuru deko iri rinobva rapa pfiga paburi apa, richinama buri rese, zvekuti hapana ropa rino papfuura. Kudzokera kumwana asati azvarwa: deko iri rino sundwa nyore neropa rinobva ku vena cava asi richi ramba kuti ropa rapinda muvheini-inenge-atari riende kumapapu. Saka tinga funge kuti, tichi zvibvumawo, kuti mumwana asati azvarwa ropa rino ramba richienda richibva kuvena cava richienda muvheini-inenge-atari richipinda mumoyoruboshe. Rapinda kudaro harichagona kudzoka shure.
Rimwe sanganiro riripo riripakati peatari-inenge-vheini [sanganiro iyi inowanikwa tsinga ichangobva pamoyorudyi yavakumhandika kuita mapazi maviri] nemukova unosveveredza kunobata ziatariguru. Mumunhu mukuru mukova uyu unotetepa wosvava dzamara waoma zvinoita tsinga yerukuvhute. Pakuvhiya nekupatsanura mwanasvodzwa, atarihuri inoita seinemidzi miviri kana kuti pane atarihuru mbiri.
Mukana uyu unenge atari hauna chidzivo chingatadzise ropa kufamba zvakanaka kuenda mberi kana shure. Asi pasanganiro pemukova uyu neatari-inenge-vheini, divi reatari-inenge-vheini rakagaririrwa nemavharuvhu matatu. Aya anoregedza ropa rinobva neche kumoyorudyi richi pfuura nyore richienda kuziatariguru, asi richi tadzisa zvachose kuti ropa rinobva kuziatariguru kana kuti kumapapu kuti riende shure kumoyorudyi. Saka mumwana asti azvarwa zviri mugwara kuti titi ropa rino garo fambiswa kubva kumoyorudyi richienda kuziatariguru panogwinha mwoyo.
Zvino taurwa kaka wanda kuti masanganiro aya, [nekukura, kuvhurika nekusava nezvidzivo kwaakaita] ndeekuendesa chikafu kumapapu, asi muvanhu vakuru [maangatoda chikafu chakawanda nekuti anoumvuta neudziya hwakawanda] anovhara achibva asavapo. Aya manyepo atisinga fanire kubvuma uye hazvipindirane neruzivo. Mamwe manyepo zve ndeekuti mumwana asati azvarwa mwoyo ugere zvawo pasina zvaunoita, usingarove, wakangoti mwii, zvakabva zvaita kti usiki huumbe mikana iyi kuti mapapu awane mararamiro. Kungo ringa zviri muzai riri kurindirwa nehuku, nechimero chaburizisa kutowa muchibereko, zvinoonekwa kuti mwoyo unorova mazviri zvimwezvo semumunhu mukuru, zvekuti usiki hausi pachimanikiro. Ini pachangu ndakazvinonera, kana Aristotle anozvipupura achiti: ‘kurova kuno oneka kumavambo chaiko mwoyo uchitotanga kukura, zvinooneka pamhuka mhenyu ikavhiyiwa ichipatsanurwa kana muzai rine nhiyo irikukura.’ Ndikato pamhidzira nekuti, nzira dzeropa idzi [muvanhu nemumhuka dzimwe] dzakato shama kuvhurika panguva yekuzvarwa [apa nyanzvi dzemaumbirwo emuviri vakatozviona kare vakanyora nazvo] pamwe nekuti kana kwemwedzi yakati kuti, kana makore chaiwo zvekutoti hupenyu hwese mune dzimwe mhuka dzakaita se madhadha neshiri dzimwe zhinji kana mhuka diki. Zvingadai kuti ndizvo zvaka kangaidza Botallo kuti azoti awana imwe nzira ino famba naro ropa richibva kuvena cava kuenda kumoyoruboshe. Ndino bvuma kana ini kuti panda kazvionerawo mbevahombe yandakange ndabata, ndakambozvifungawo ndawana nzira itsva.
Zvese izvi zvinoreva kuti hapana kusiya zvinoitika mumeromunhu [mwana achiri kuumbika asati azvarwa: embryo], nezvinoitika mumeromhuka nzira idzi madzisingazo vharika. Saka mwoyo, nemarovero awo, unofambisa ropa kubva zviripachena kubva muvena cava uchiri pfuudza nemumaventricle ari mairi kuenda mutsingaguru.
Saka mumeromhunhu, mapapu paanenge agree zvawo achiita seasina nebasa rese nekugara zvawo asingamboitawo chinhu, Usikwa [Neicha] huno shandisa maventricle ari maiyi kuti angofambisa ropa chete. Embiriyo ine mapapu, asi isinga ashandise yakango fanana ne iyo isina zvayo mapapu.
Chasara zvino kubvunza mubvunzo unoti sei mumhuka huru [nesu muvanhu], ropa risisa fambe nenzira dzaye dzaraipinda naro mhuka ichiri embiriyo; kana kuti tobvunza tichi zvino batsireyi Neicha [usikwa] kuti nzira dzaifamba neropa muembiriyo dzivharike mumhuka [nesuwo isu] dzayaruka [nzira idzi hadzivharike mune dzimwe mhuka]. Sei pasinawo dzimwe nzira dzavhurika, panzvimbo yekuti kuvhurika uku kunenge kunoto tadzika kuvako.
Tasvika zvino pekuti tingati Neicha ingadei pakuti ropa rimbopfuura nemumapapu. Mhinduro yacho yakadai, kana kuti ino tevedza pfungwa yakaai.: mhuka huru idziyamiri zvekuti dzinga kwanise chaizvo to pisa zvakanyanya zvekutadza kukamura hupisiri hwacho. Saka ropa rino pisa iri rinomboenda nekuma papu kuti furwe nemweya watinofema rigo tonhodzwa nekubiswa mafuru. Kuti ndinyatsoi pedze nyaya iyi zvino gutsa, kutoda kuti tiongorore maumbirwo awo mapapu.